Amaqela eGalicia WhatsApp. Joyina eyona groupsAmaqela aseGalician】?
Yabahlali baseGalati naseGalati abajongileyo amaqela e-whatsapp kwabo bajoyinayo, ke unayo amaqela aWhatsApp abalaseleyo eGalicia.
1 Amaqela e-WhatsApp Galicia
2 Unxibelelaniso lweqela le-WhatsApp Galicia
3 Amaqela e-WhatsApp Galicia
3.1 Abalandeli baseAsia eGalicia
3.2 Abadlali beGalicia
3.3 Iindlela zakudala zaseGalicia
3.5 Ukuhamba eGalicia
3.6 Galia Boxing
3.7 Isibini isidlo sangokuhlwa Galicia
3.8 YeGalike Galia
3.9 Iqela eliphantsi lesithuthuthu
4 Nyusa amaqela e-WhatsApp Galicia
5 Yenza iqela le-WhatsApp iGalicia okanye iGalician
En gromania.neAsithandi ukuthumela amaqela aWhatsapp aphambili kwaye kule posi sifuna ukudwelisa amaqela eWhatsApp emixholo eyahlukeneyo kodwa ngento enifana ngayo, angamaqela e-WhatsApp abantu baseGalicia.
Khetha ngoku amaqela e-WhatsApp amaGalician anomdla kakhulu, uwajoyine ukuze uqale ukudibana nabantu.
Enye inketho elungileyo ukuba uyiGalician kukwakha iqela lakho le-WhatsApp. Ukuba uyayenza, ungabelana ngayo ukuze kongezwe abasebenzisi abatsha ucofa apha.
Unxibelelaniso lweqela le-WhatsApp Galicia
Kwakhona khumbula ukuba xa ungumncinci akufuneki ujoyine amaqela e-WhatsApp ngaphandle kwemvume yabazali bakho.
Abalandeli baseAsia eGalicia
Inkcazelo: Ukuba uthanda umculo wase-Eshiya, i-anime, iidorama, yenza geek kwaye ujonge ukujongana nathi, yijoyine nathi ukuba le yindawo yakho.
Ingcaciso: Iqela libalela kunye nabadlali. Ngokukhethekileyo sineminyaka engama-21 kunye engama-23 ubudala kodwa kuvulekile ngokupheleleyo kwaye ukulingana phakathi kweminyaka kwamkelekile. Iinjongo: dlala, yakha ubuhlobo kunye nee-vibes ezilungileyo.
Iindlela zakudala zaseGalicia
Inkcazelo: Kwiindlela kunye nokukhwela kunye neemoto zethu zakudala.
Inkcazelo: Ubuhlobo kwaye uthethe ngayo nantoni na ehlala ivela kwintlonipho.
Inkcazo: Iqela leWhatsApp ukwenza uhambo lweqela kunye nokufumana iindawo ezintsha.
Ingcaciso: AbaseGalati bamabhokisi bajoyine eli qela ukuze babenolwazi ngomlo kwaye baxoxe ngalo mbandela. Yazisa ngokhuphiswano eGalicia kwaye wonwabe.
Isibini isidlo sangokuhlwa Galicia
Inkcazo: Iqela lokudibana nezibini ezinabantwana, usapho ... abafuna ukuphuma bayonqamula.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp labahlobo beGalician.
Iqela eliphantsi lesithuthuthu
Inkcazelo: imizila ngezithuthuthu zethu, ukutya okuhle, ubuhlobo, intlonipho. 1) Iipikipiki / ii-Scooters ukuya kuthi ga kuma-300cc, akhwela ukukhwela. 2) Thatha uhambo kunye nathi. 3) Ngokukhethekileyo iGalicia kunye nendawo engqongileyo.
Nyusa amaqela e-WhatsApp Galicia
Ukuba uzithandile ezi Amaqela e-WhatsApp eGalicia, Ndikumema ukuba wabelane ngale posi nabahlobo bakho kwiinethiwekhi zentlalo.
Yenza iqela le-WhatsApp iGalicia okanye iGalician
Ukuba awuyifumani Iqela le-WhatsApp laseGalicia into obuyikhangela, ukhetho oluhle kukuba uzenzele ngokwakho kwaye wabelane ngalo kwiwebhusayithi yethu ukuze kwandiswe abathathi-nxaxheba abatsha. Unako yenza iqela le-WhatsApp eGalicia kwaye lipapashe ucofa apha.